Xasan Cali Khayre oo ka dhegay Nairobi, Ololaha Doorashada iyo Siyaasiyiinta ku shirsan Kenya | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Friday, October 9th, 2020 | Posted by kalshaale
Xasan Cali Khayre oo ka dhegay Nairobi, Ololaha Doorashada iyo Siyaasiyiinta ku shirsan Kenya
Nairobi ( Kalshaale ) Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, Islamarkaana ah Musharax u taagan Xilka Madaxwaynaha JFS ayaa xalay soo gaadhay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa garoonka Diyaaradaha Joma Kenyatta ku soo dhoweeyay mas’uuliyiin iyo dad wayne kale oo kamid ah Taageerayaashiisa.
Waana lugtii labaad safaro uu ku marayo dalalka deriska iyo dalal kale, kaasoo la xidhiidha ololihiisa doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
Khayre ayaa dhowaan Booqasho ku tagay dalka Jabuuti, wuxuuna halkaasi kula kulmay madaxwayne Ismaaciil Cumar Geelle.
Magaalada Nairobi oo inta badan Xiliga DoorashadaÂ Soomaaliya Siwayn ay Siyaasiyiintu ugu kulmaan ayaa hada waxaa ku sugan Mushariixin kala duwan, waxaa sidoo kale dhankooda Abaabul ka wada dalalka doonaya inay Faragelin ku sameeyaan Arimaha gudaha ee Soomaaliya.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=34064
Posted by kalshaale on Oct 9 2020. Filed under MAQAL IYO MUUQAAL, WARARKA, XULKA KALSHAALE. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
25 Comments for “Xasan Cali Khayre oo ka dhegay Nairobi, Ololaha Doorashada iyo Siyaasiyiinta ku shirsan Kenya”
October 9, 2020 - 10:12 am
Xanuunkii kablalax wuu faafey sawka kukuyo iyo lookalabadinayo isha waxkasta kayimaadaan waa anaka
@Mr bahal meyla socota macalin
October 9, 2020 - 10:22 am
Mudane Cali M/muud Samatar “Cali Gurey”, WAXAAN uga tacsiyeen, geeridi ARAGTI-WADAAGIISI Cali Khaliif Galayr. â‰ˆÂ©â‰ˆCaliyow, Wiilka iyo Gabadha ku nool Daafeed, Waxay ku leeyihiin; “Caliyow waan ku sugaynaa ee Hargaysa kaliya HAKU qoob xirnaan ee Cali Kaliifyada qarsoon raadso!!!”. â‰ˆÂ©â‰ˆWaxaan aaminsanahay inaan LA garan HAWA la warankayga. WBT
*Caliyow, Beenta iskuma fiicnin oo MUSLIM baan ahay EE waxaan SAA u leeyahay, Aaqirki 1980maadki, waxaa gurigayga iigu yimid NIN Reer Daafeeda oo igu yiri; 3/4 Oday ka hor Waxaan ahayn ISAAQ. ALLAA WEYN.
October 9, 2020 - 10:57 am
Waxan maqli jirey hadii aad amaan dooneyso dhimo
Hada waxan ku xasuustay inti caayi jirtey cali qalif baa ugu amaan badan marki uu dhintay bal hada eega odagi is qarin jirey ee axmed laba go le wa hiih iyo haah ka baxaya axmed laba go le adeer cali qalif maanta amaan uma baahna ee duco ayuu baahan yahay ee allah ha u naxaristo
Wuxu ahaaba xaga rabi baa looga yeedhay ruuxdi yadhey ee ku jirtey
October 9, 2020 - 11:01 am
Maxa tidhi sxb waxa jid qarda jeexa ee Somalidu ku habowdo anaga u horkacna oo wax nalaga weydinaya
Taas been kuma sheegin taas walow ey jidhan jidad badan oo ka idinka diidey
Hiraab waxbaa haysta afar sano ayaad farmaajo kadaba qaylinayseen afar sanoo kalena khayre ayaad kadaba qaylindoontaan maalinta doorashada waraa jiridoonee wiishka lee hayeero
October 9, 2020 - 12:01 pm
Dr cali ciise abdiyow
Meesha ka kac oo baritan gal marxumaka geridiisa
Mugdiyo halis badan baa ku gadaman
Markii aan dhegaystay
Afhayeenka ONLF mr cadaani
Abdi nuure siyaad
Dhakhtarkii gacanta ku hayey marxuumka
Waxay isku raceen inuu xanunkisa ka bilowday
Cunto sumowday sidey wada shegen matag iyo
Shuban saaid ah ka dib marxuumka wu fuuqbaxay
Taa waxaa ka sii daran ma helin daryeelki u bahna
oo wuxuu ku dhex geriyoday hoteelkii uu degana
October 9, 2020 - 12:03 pm
2020 at 8:19 am
Dr cali cisow
Bal codkan ila dhegayso
Waa xaqiiq Soomaalida qofku marka UU dhinto aad bay u amaanaan, waxaana keenaya munaafaqadooda ayaa badan.
Abgaalka ayaa marka ay rabaan inay qof si dadban u habaaraan waxay yiraahdaan AR IGA TAG CIDAADU KU FAANFAANSATAYE.
October 9, 2020 - 12:33 pm
Kheyre waxaa Hortaal
Maxaad qabatey 4 sano oon ka aheyn inaad Difaacdo Seedigaa.
Anigu aad ayaan u soo dhaweyn hayaa inuu Kheyre iska garab sharaxo Farmaajo,
Maxaa yeelay waxaa ka culeys badnaan laheyd iney isku SANTUUQ WAX KU DOONTAAN.
October 9, 2020 - 12:34 pm
Waar iska daba wareeggii Soomaalida oo weli socota.
Bal gaalka Kuukuyadu iska soo dhis maxay soo kordhinaysaa anigoo og inuu guryo ku leeyahay halkaasi.
Horta gaaljecelka maxaa kugu qasbahaya. Marna gabra, marna Abiy marna Kenyaata.
Ma waxaad ku faanaysaa inaad ka been sheegto dad la gumeysto oo maata caana ah. Jubbaland Dhuxulayste doonahaya inuu Keenyatiga hoos geeyo. Ha sheegan cid aadan ahayn inta Suldaanka joogo golahan
October 9, 2020 - 12:40 pm
Ayaa dhihijirey Farmaajo iyo Kheyre xitaa Waqtiga Doorashada wey wada shaqeyn oo waa
Aadan Cadde iyo C/risaaq Xaaji Xusseen KII LABAAD
Hodan Guulwade ayaa dhihijirtay
Farmaajo iyo Kheyre maahan Mudullood iyo Majeerten waqtiga Doorashada Madaxweyne iyo Rasalwasaare TARTAMAAN.
Alla Kooxdii CBB maxaa hadal iyo AMMAAN ka tagey,
Subaxow dhahey Doorashadu waqtigeeday ku dhaxee Wuxuu bilaabey
@ Ahmed Hangash KHEYRE WUU KIBRAY, KHEYRE WUU NASIREY, KHEYRE MAAHAN KII HORE.
* Aqli GAAWEETO lagu cabbiraan HADBA LAAN CUSKAN.
October 10, 2020 - 12:52 am
DABSHID, MUNAAFAQ BEELOOWA. WBT
October 9, 2020 - 12:55 pm
Waryaa waad huradaa waxaa jira dagaal soomaalidu kuhayso kumade adigaa reer waamo ee sadex qarni daganaa jubbooyinka hadana waxaa lagu odhan qaxooti itoobiyaan iwm beesha absame qeybta soomaaliya maxaa sida qabiilada kale loola dhaqmi LA yahay balsheeg
October 9, 2020 - 1:05 pm
Ma waxaad leedahay naga daaya EXILEka
Hadda Absame soo dhaaf Xeryaha oo wuxuu labadii doorasho ee la soo dhaafey kor-joogto ka ahaa Gogoshii looga tashanhayey Soomaali Koofureed.
Koofur waxaa reer Qurac uga masuul ah
Majeerten iyo Mareexaan
Waqooyina waxaa uga masuul ah
Dhuloos iyo Waroos.
* Korjoogtaduna furan
October 9, 2020 - 1:10 pm
Maanta si qalbiyan ah ayuu u GARSHEEGTAY
Takoor inuu jiro waxaan ku ogaadey
In reer Muqdisho dhaheen @ Adeer Ahmed adigu hotelka sii joog magaalada waad ku dhumiye,
Deni ay u sameeyeen WELL COME CAKE
Labo nin oo Kablalax oo wada socdo inaan isku si loo soo dhaweyn waa – HESHIIS HOREY LOO GAAREY.
October 9, 2020 - 2:10 pm
Fiiri raysal wasare kuxigeenku waa itobiyan waliba kililka kashaqynayey mudo hadana waa muluq isaaq kii cagdheer ahaa raqabada lahaysta takoor aa jira
October 9, 2020 - 2:14 pm
Kii dhagaxbuur shalay kayimid iyo kii reer afmadaw waa iskumid dagaal dadka AF somaliya kuhadla iyo ayaa qarxaya
Dagaal ayaa galay.
Nac ayaa galay.
Qofka bani.aadamka ah haduu dagaal galo magaran karo halkuu ku ekeyn karo.
Waan ka xumahay Mr kheyre in uu ka mid noqdo asxaabta Kenya.
Kenya itoobiya emaraadka khadar.
Intaasuba waa cadow aanu leenahay oo qolo walbo dan gooniya leedahay.
Siduu saaxibkeey Mr bahal horay u sheegay somalidu waa wada xanuunsan tahay. Mana kala yaqanaan wax u xun iyo waxa u wanaagsan.
Mr kheyre hanweyn ayaan u haayay waxaan islahaa xuriyo markaan haloo dhiibo. Haduuse hada Kenya naf ka raadiyay waa rejo beelka siyaasadiisa.
Mr galaydh alla raxma.
Jigjiga calool xumaan u hayaa
Waa uun iskaxanuunkase ilaahay aa waxdila jijiga ma malag ayaa soomaalida ufadhiya sxb cajiib
Waagii hore eithopia ayaa loo yaaci jiray hada kenya ayaa badashay reer guuraagu meeshii roob ka Dao ayay u hayaamaan hada kenya ayaa roob xoogan ka da.ayaa ee halkaas reeraha haloo raro
Waxa uu Daaroodku sameeyo ama dariiqa uu maro,Hawiyana cagta ayuu saaraa.Hawiye iyo Daarood waa sida afka iyo gacanta oo isquudiya.
Daarood waa ninka hor socda dhaqan siyaasadaadeedka qudhunsan ee ka jira Somaliya,Hawiyana waa daba joogaa oo dibada ayuu ku sugayaa marka Tuuga Darood wax soo halaagayo.
Waxaa intaasi ka daran kuwii yaryaraa oo daawanaya waxa dhacaya,misana ku taamaya inay maalin uun gaadhaan suuqa dabadhiulifnimada ee u xidhan labdaasi Duul.
Isku soo wada duub oo tani way dhimatay.Macalikeedu waa Daarood kalkaalihiina waa Hawiye.Wixii la soo xaday ayuu sii xaday.
Madaxwayne soo dhowow sanadkan guusha waa
Xagaaga ee hogaami Qaranka somaliyed dadka leh
Kenya maxaa loo tegey …… dee kenya dalka ha
Laga ceyriyo sow ku wan safarada ku leh muqdisho
sow ragoo dhan ma booqdan kenya maxaa khaas
Ku ah madaxwayne khayre war isla xishooda
October 9, 2020 - 7:28 pm
Mr KHAYRE waa siyaasiga kaliya ee REE QANSAX oon Canbaar siyaasadeedi ku ool…
Waxaase ku hirgisaya oo waalaya kooxihii awal karkaarka waydaariyay oo sallaanka ka dhigtay, haddana doonaya inay ka taqallusaan, his political ambition. Isna waliba ma oga shaxda loo degayo…
October 9, 2020 - 8:56 pm
@mr indha xafajo, ADNA WAXAAD TAHAY SUULI AY KU XAARAAN!
Gaafow Oromo wrote without proof
“Waryaa waad huradaa waxaa jira dagaal soomaalidu kuhayso kumade”
Iska hadlow ina Igarre. Beentaada uma baahna jawaab. Dagaal baa kuumade lagu hayaa kulahaa…..kkkkkkkk . Riwaayaddan waa mid dadka lagu marin habaabinayo
” adigaa reer waamo ee sadex qarni daganaa jubbooyinka hadana waxaa lagu odhan qaxooti itoobiyaan iwm”
kkkkkkk Waar daanyeerkan been badanaa. Adeer Ogadeenka Jubbaland boqollaal sano ayay joogaan. Adigaaa laaji ah oo ku dhex dhuumanaya bulshada. Haddaad Soomaali xalaal tahay Soomaali kale kuma sheegteen qaxooti.
” beesha absame qeybta soomaaliya maxaa sida qabiilada kale loola dhaqmi LA yahay balsheeg”
Waxaa loola dhaqmi waayay waxaa weeye Jubbaland waxaa ku habsaday daanyeerro aanan aqoon taariikhda deegaanka iyo sida Soomaaliya wax loola qaybsado